တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များကိုစည်းရုံးမည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော | 미얀마 버마 緬甸 Myanmar Burma
Mandalaywith 2012. 3. 5. 01:44
ပြည်သူများအတွက် အကျိုးမရှိသော ဥပဒေများ ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့် ပြဋ္ဌာန်းခြင်းများ လွှတ်တော်အတွင်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်မှသာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်သဖြင့် ပြည်သူအကျိုးကို လိုလားသော တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်များကိုပါ စည်းရုံးသွားမည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က စစ်ကိုင်းမြို့ လူထုဟောပြောပွဲတွင် ပြောကြားသည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) အနေနှင့် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိပါက လွှတ်တော်အတွင်း လူနည်းစုသာ ဖြစ်မည် ဖြစ်သဖြင့် ထိုသို့ စည်းရုံးရန် လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားသည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်သည် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ပြင်ဆင်ရေး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး တို့အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောဆိုထားပြီး ဖြစ်သည်။
တပ်မတော် အစိုးရက ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ လူထုဆန္ဒ ခံယူပွဲဖြင့် အတည်ပြုခဲ့သော ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရန် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်တွင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အထက် သဘောတူညီမှု ရရှိရန် လိုအပ်သည်။
တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်ရန် ခွင့်ပြုထားသဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြည်တွင်းပြည်ပမှ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူ အချို့က ထုတ်ဖော် ပြောဆိုကြသည်။
ကော့မှူးမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အဖြစ် အရွေးချယ်ခံမည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် လွှတ်တော်တွင်း ဦးစွာ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရန် လိုကြောင်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အချို့က ပြောဆိုသည်။
" ရောက်ရောက်ချင်းတော့ လုပ်ဖို့ မလွယ်သေးဘူး။ အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှုတွေ ရှိလာအောင် ဥပမာ အများပြည်သူနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဥပဒေပြုရေး ကိစ္စရပ်တွေကို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရမယ်။ အချိန်တစ်ခုတော့ ပေးရမယ်။ ပြင်ချင်တဲ့ ဥပဒေတွေက တကယ် ပြင်သင့်ပြင်ထိုက်တဲ့ ဥပဒေဖြစ်ဖို့ လိုတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ဆန္ဒအတိုင်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် မဲပေးပိုင်ခွင့် ရရှိဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ် " ဟု သီပေါမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးရဲထွန်းက ပြောကြားသည်။
တိုင်းရင်းသားများ အနေနှင့် ပြည်ထောင်စုမှ မခွဲထွက်ဘဲ စီးပွားရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးများတွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်၍ နိုင်ငံရေးပါတီများ ထူထောင်ကာ လွှတ်တော်အတွင်း ရောက်ရှိပါက အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရန် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က မတ် ၁ ရက်နေ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် မိန့်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
တပ်မတော် တပ်ရင်း တပ်ဖွဲ့များ တည်ရှိရာ အောင်ပန်းနှင့် ကလောမြို့များသို့ သွားရောက်ခဲ့သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ခရီးစဉ်တွင်လည်း အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး တပ်မတော်သားများ အကူအညီ ပေးရန် ပြောဆိုခဲ့သည်။
ယခုအချိန်တွင် လုပ်ဆောင်ရမည့် အလုပ်တစ်ခု မလုပ်ခဲ့လျှင် နောင်တွင် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ နိုင်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အတိတ်က မလုပ်သင့်သည်များ မလုပ်ခဲ့သဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ကိစ္စရပ် အပေါ် ချက်ချင်း ပြုပြင်ရမည်ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
လုပ်သင့်သည့် အချိန်တွင် မလုပ်ဆောင်ခဲ့၍ ယခု ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်း ပေါ်လာချိန်တွင် အားလုံး အင်တိုက်အားတိုက် ဆောင်ရွက်ရမည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုသည်။
စစ်ကိုင်းမြို့သို့ ရောက်ရှိလာမည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကြိုဆိုရန် ဝန်းသို၊ ကောလင်း၊ ပင်လယ်ဘူး၊ ဗန်းမောက်၊ ကသာ ဒေသများက ဒေသခံများက တစ်ရက် ကြိုတင် ရောက်ရှိ နေခဲ့သည်။
မန္တလေး မဲဆွယ်ခရီးစဉ် အတွင်း ဒေသခံ တေးသံရှင် လင်းလင်း လိုက်ပါကူညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နံနက်ပိုင်းတွင် မစိုးရိမ် တိုက်သစ်တွင် ဝါဆိုဆရာတော်ကို သင်္ကန်းများနှင့် ဆွမ်းချိုင့် ကပ်လှူပြီးနောက် အမရပူရမြို့ မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော်ထံ သွားရောက် ဖူးမြော်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် စနေနေ့က ကျန်းမာရေး အခြေအနေကြောင့် ခေတ္တအနားယူ ခဲ့သော်လည်း ယနေ့တွင် စစ်ကိုင်းမြို့သို့ ဆက်လက် ထွက်ခွာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မန္တလေးမြို့တော် Mandalay Hill Resort ဟိုတယ်သို့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် ပြန်လည် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး မတ် ၅ ရက်နေ့တွင် တံတားဦး၊ မိတ္ထီလာ၊ တောင်တွင်းကြီး၊ မြင်းခြံမြို့များသို့ သွားရောက်မည် ဖြစ်သည်။
◀ 이전 1 ···4567 8910 11 12 ··· 61 다음 ▶